Mgbapu nke Moto G5S Plus na-ekpughe nkọwa na onyonyo ọhụrụ Akụkọ akụrụngwa
Mgbapu nke Moto G5S Plus na-ekpughe nkọwa na onyonyo ọhụrụ
Otu n'ime ụmụ nwanyị ndị a na-enweghị mgbagha nke etiti etiti mgbe ọ bịara na telephony mkpanaka bụ Motorola. Ma, ikekwe, n'ime ezinụlọ dị iche iche nke ụlọ ọrụ ahụ nabatara, ezinụlọ G bụ ndị kachasị ewu ewu n'etiti ndị ọrụ. Ọzọkwa, ebe ọ bụ na ọ dịghachi ndụ na 2012, ụlọ ọrụ America akwụsịbeghị ịghaghachi ihe ịga nke ọma. Ọ chọkwara ịga n'ihu otu a. Akwụkwọ ndị ọzọ a na-atụ anya na July a bụ ihe ọhụrụ Moto G5S na Moto G5S Plus.
Otú ọ dị, anyị ga-elekwasị anya na ihe nlereanya a kachasị ọhụrụ, nke bụ onye protagonist nke ọhụụ a na-adịbeghị anya, dị ka ọnụ ụzọ ụgbọ mmiri si kọọ SlashGear. Ihe omuma ekpughewo nye anyi onyonyo ọhụrụ nke ọnụ, yana ụfọdụ njirimara ọrụaka na anyị nwere ike ịchọta na nnukwu esote ahịa nke ika ahụ.
Nke na-esote Motorola Moto G5S Plus ga-abụ ihe nlereanya kachasị nke akara nke malitere na gara aga ụdị. Ọ bụ ezie na ekwenyebeghị data ahụ, asịrị niile na-egosi na anyị ga-eche ihu ọdụ ya na ihuenyo diagonal 5,5-inch na mkpebi HD zuru oke.
Otú ọ dị, eziokwu kachasị dị mkpa nke a Moto G5S Plus bụ, ikekwe, igwefoto ya abụọ. Dabere na isi mmalite nke chọpụtara ozi ahụ, akụrụngwa ahụ ga-enwe sensọ abuo 12,9. Na usoro ị ga-eso ga-abụ nzọ na ihe mmetụta RGB na nke ọzọ monochrome. Ijikọta njide abụọ ahụ ga-arụpụta nsonaazụ kacha mma.
Ogo nke batrị ya agafeela. Nke a ga - abata na ikike nke 3.072 milliamps, otu ọgụgụ zuru ezu iji rụọ ọrụ ụbọchị zuru ezu. The gam akporo version na a ga-arụnyere nwekwara leaked. Na nke a ọ ga-abụ gam akporo 7.1.1 Nougat, otu n'ime nsụgharị kachasị ọhụrụ nke ikpo okwu. Na njedebe, ndị ọzọ data na-abịa ìhè bụ processor na ya na ebe nchekwa. Motorola ga-agba na 626-core Snapdragon 8. Nke a ga - esonyere 4 GB RAM. Ọ bụ ezie na ebe nchekwa ya ga-eru 64 GB.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Telephony » Mobiles » Mgbapu nke Moto G5S Plus na-ekpughe nkọwa na onyonyo ọhụrụ
Andy Ruben's smartphone dị mkpa ga-abata na Europe n'agbanyeghị n'ụzọ dị oke oke